Warmly Welcome: November 2008
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းမိတဲ့ အချက်တွေကို ညီမ ငှက်ငယ်လေး က Tag ထားတာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းမိတယ် ဆိုတာထက် ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အလိုမကျမှုတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့မပြည့်စုံမှုတွေလို့ပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နားလည်မှု လွဲမှာစိုးလို့ပါ။ အရင်တစ်ခါ Tag ခဲ့တုန်းက နားလည်မှု အတော့်ကို လွဲခဲ့ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Tag ခံရမှာ စိုးကြောက်မိတယ်။ များသောအားဖြင့် Tag တွေက ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝအစိတ်အပိုင်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဖော်ပြလိုက်သလို ဖြစ်နေတတ်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းရဲ့ ရင်းနှီးမှုအတွက် ပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ပါးသူကို အားနာတတ်တဲ့အတွက် .. ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းမိတယ်
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တတ် လွန်းတဲ့အတွက် .. ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းမိတယ်
ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းဘယ်မရွေ့ဆိုတဲ့ ခေါင်းမာတတ်လွန်းလို့ .. ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းမိတယ်
အိမ်ပြင်ထွက်လည်ရတာမနှစ်သက်တဲ့ အိမ်ပုန်းဘဝကို မုန်းမိတယ်
ခရီးထွက်တိုင်း အရေးကြီးတဲ့ သွားတိုက်တံနဲ့ သွားတိုက်ဆေး အပြင် under-ware တွေ မေ့ကျန်တတ် တာကိုလည်း မုန်းမိတယ်
မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို လိုက်ဖြေရှင်းနေရတဲ့ အချိန်တွေကို မုန်းမိတယ်
တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်ထဲအတွက် အစွဲအလမ်း ကြီးလွန်းတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းမိတယ်
လိုတာမရ ရတာမလို ဖြစ်နေတဲ့ လက်ရှိအချိန်လေးကို မုန်းမိတယ်
အင်တာနက်တက်တိုင်း ကွန်နက်ရှင်မကောင်းရင် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းမိတယ်
ဂျီတော့ပ်ထဲ ဘားကလစ်နဲ့ရေးလာတဲ့ စာကို ခဏခဏ နားလည်မှုလွဲ လွဲနေတာကိုလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းမိတယ်
တစ်ကယ်တမ်း ချရေးလိုက်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလိုမကျတာတွေ၊ အားနည်းချက်တွေ၊ မုန်းမိတာတွေက အများသားပါ။ ရှေ့ဆက် ရေးမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ကောင်းကွက်တွေက နည်းလေတော့ ဘယ်သူမှတောင် အနားကပ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ညီမ ငှက်ငယ်လေး ရေဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်နိုင်ပါစေလို့။ ဒီ Tag အတွက် မျက်ခုံးလှုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေကိုတော့ ဆက်မ Tag တော့ပါဘူး။ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by Welcome at 8:51 AM
ပေးမဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချစ်များ .. ..
ရန်ကုန်မြို့ထဲ ဘယ်နေရာ သွားသွား နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နိုင်တာကတော့ စတစ်ကာမှန်မည်းမည်း တံခါးတပ်ထားတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင် တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း အင်တာနက်ကဖီး ရယ်လို့ တပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အင်တာနက် ဆိုတာနဲ့ စိတ်ထဲမရိုးမရွဖြစ်ပြီး ဝင်ထိုင်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ တစ်ဆိုင် ပြီးတစ်ဆိုင်ပေါ့။ ဒီလို အင်တာနက်ဆိုင်တွေကို ဆိုင်တိုင်းနီးပါး မဟုတ်တောင် ရောက်တတ်ရာရာ ဆိုင်တွေကို ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ထိုင်ရင်းကနေ ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ပိုမိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ အင်တာနက်ဆိုင် ဆိုရင်တော့ (၂)ကြိမ် (၃)ကြိမ် ပြန်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ အင်တာနက်ဆိုင်တွေ အပြိုင်အဆိုင် အများအပြား ဖွင့်လာတဲ့ အတွက် ဆိုင်တွေကလည်း အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို မေးမြန်း ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ ဆိုင်တွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အရင်က CRT မော်နီတာ သုံးခဲ့တဲ့ ဆိုင်တွေ အခုဆိုရင် LCD မော်နီတာတွေ ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ပေးပါတယ်။ (၁၇)လက်မ မော်နီတာအစား (၁၉) လက်မမော်နီတာ တွေ ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ပေးပြီး အင်တာနက် သုံးစွဲသူတွေကို ဖမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခကြေးငွေ အနေနဲ့ကတော့ တစ်နာရီကို အစားစား ယူတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျပ် ၄၀၀ ကနေ ကျပ် ၈၀၀ အထိ ယူတာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ ဆူပါမားကတ် တွေပေါ်မှာတော့ တစ်နာရီ ကျပ် ၁၀၀၀ ယူတာ တွေ့ရပါတယ်။ မီးစက်ကို အသုံးပြုပြီး ဖွင့်တဲ့ ဆိုင်တွေလည်း ဈေးတစ်မျိုးယူတာကို သိရပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း Member card နဲ့ သုံးစွဲနေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
အင်တာနက်ကဖီးဆိုင် တွေကိုတော့ ကျွန်တော်ပိုနှစ်သက်မိပါတယ်။ သူက ကော်ဖီ၊ အအေး၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်ပြုတ်၊ ပေါင်မုန့်၊ ကိတ်မုန့် တွေအပြင် Snack တွေပါ လွယ်လင့်တကူ စားသုံးနိုင်လို့ပါ။ တစ်နာရီထိုင်မယ့်အစား စားရင်းသောက်ရင်း အင်တာနက်ကြည့်နိုင်တော့ နှစ်နာရီလောက် ထိုင်ဖြစ်သွားတာ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး အင်တာနက်စပြီး အသုံးပြုမယ့် လူငယ်တွေအတွက်လည်း အင်တာနက်အသုံးပြုနည်း၊ ချက်တင်တက်နည်း သာမက account တစ်ခု ရအောင်ကိုပါ ၀န်ဆောင်မှု ပေးတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆိုင်အပြင်အဆင်ပေါ့။ ရိုးရိုးပလပ်စတစ်ခုံအစား သက်တောင့် သက်သာဖြစ်အောင် ဆုံလည်ခုံတွေ ထားပေးလာတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သုံးစွဲနိုင်ဖို့ မော်နီတာ တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံးကို အကာအရံနဲ့ လုပ်ပေးထားတာလည်း သုံးစွဲသူတွေကို စွဲဆောင်နိုင် ပါတယ်။ နောက်ထူးခြားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကတော့ ကိုယ်ပိုင် လက်တော့ပ်ဖြစ်စေ၊ စမတ်ဖုန်းဖြစ်စေ၊ ဟန်းဆက်တွေနဲ့ဖြစ်စေ လာတဲ့ သူတွေကိုလည်း အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှု ဆောင်ရွက်ပေးတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အင်တာနက် သုံးစွဲခကတော့ ဈေးနှုန်းအတူတူပါပဲ။
လူသုံးများတဲ့ software တွေဖြစ်တဲ့ VZO chat, g-Talk, Over-sea ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေအတွက် ပြင်ဆင် ထားတာအပြင် အင်တာနက်ဂိမ်း တွေကိုလည်း အခန့်သင့် ထည့်သွင်း ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်း ပြတ်တောက်သွားရင်လည်း သုံးစွဲသူတွေ ထပြန်မသွားအောင် မီးစက်နဲ့ သီချင်းတွေ နားထောင်နိုင်အောင် သီချင်းမျိုးစုံကို စက်ထဲ ထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။ နောက် ဂိမ်းကစားနည်း အစုံအလင်ရောပါပဲ။ အင်တာနက်ဆိုင်တွေ လုပ်ငန်းတူ များလာတဲ့အတွက် ဈေးကွက်မှာ ထိုးဖောက်ဖို့အတွက် ကြော်ငြာအပိုင်းကလည်း အရေးပါလာပါတယ်။ ကိုယ့်ဆိုင်ကို ကြော်ငြာရင်းနဲ့ ဆိုင်ရဲ့အရည်အသွေး ကိုလည်း မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိတာကို မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါကတော့ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ အင်တာနက်နဲ့ အင်တာနက်ကဖီးဆိုင်တွေပါ။ ကျွန်တော်ခရီး သွားတုန်း ရောက်ခဲ့တဲ့ အင်တာနက်တက်ခဲ့တဲ့ တောင်ကြီး၊ မန္တလေး၊ ပျဉ်မနား၊ နေပြည်တော်(မြို့မဈေး)က ဆိုင်တွေကတော့ အပြင်အဆင် အနေနဲ့ သာမန်လောက်ပါပဲ။ ဘေးအကာအရံ တွေလည်း မပါတတ်ပါဘူး။ စက်က နီးလွန်းတာကြောင့် ဘေးကပြောတာ၊ web cam ကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပါ အကုန်ကြား၊ မြင်နေရတာမို့ သုံးစွဲရတာ အဆင်မပြေလှပါဘူး။ ပိုဆိုးတာကတော့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ ကွန်နက်ရှင်းကောင်းတတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်လည်ချင်တဲ့၊ ကျွန်တော် သွားချင်တဲ့ ဘလောဂ့်စပေါ့ တွေကိုတော့ဖြင့် သုံးစွဲခွင့်မရခဲ့တာ အများအပြားပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားကို တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆို နိုင်တဲ့အတွက် အင်တာနက်ဆိုင်တွေ လူစည်ကားတာ မှန်ပေမယ့် အဓိကကတော့ ချက်တင်းတက်ကြတဲ့ လူငယ်တွေကသာ အများဆုံးသုံးစွဲတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။
(ရောက်ခဲ့တဲ့အင်တာနက်ဆိုင်တွေက များတော့ ဆိုင်နာမည်တွေကိုတော့ မမှတ်မိလို့ ရေးမထည့်ဖြစ်တော့ ပါဘူး။)
Posted by Welcome at 9:22 AM
စာဖတ် ဝါသနာပါသူများ အတွက် အွန်လိုင်းပေါ်က အဖိုးတန် စာအုပ်ကောင်းတွေ ရှိတဲ့ နေရာလေးကို မျှဝေပေးချင် ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ Authors Index ကနေ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာများ ဖြစ်တဲ့ ရှိတ်စပီးယား၊ လီယိုတော်လ်စတွိုင်း၊ ချားလ်စ်ဒစ်ကင်း၊ ချားလ်ဒါဝင် စတဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့ ရှားပါးလွန်းတဲ့ စာကောင်း ပေမွန်တွေ တွေ့ရမှာပါ။ စာအုပ်အရေအတွက် မများပေမယ့် နှစ်သက်စေမယ့် စာအုပ်တွေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ အပြင်အဆင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြီး ပေါ့ပါးမြန်ဆန် စေတာကတော့ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ အားသာချက်ပါပဲ။ အွန်လိုင်းပေါ် စာဖတ်ချင်တယ် ဆိုရင်ဖြင့် ဒီကနေ Click လုပ်ရုံပါပဲ။
Posted by Welcome at 2:16 PM
လူ့လောကကြီးမှာ ယုံကြည်မှုဟာ လွန်စွာ အရေးပါလှပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ယူဖို့ ခက်ခဲတယ် မှန်ပေမယ့် ထိုယုံကြည်မှုက တစ်ခဏသာ မျက်စိတစ်မှိတ် အတွင်းမှာလည်း ရုတ်ခြည်း ပျောက်ကွက်သွားတတ် တာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဘဝနဲ့ရင်းပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာနဲ့ ခိုင်မြဲခဲ့တဲ့ ယုံကြည်မှုဟာ လူတစ်ချို့ရဲ့ စိတ်လိုက် မာန်ပါ ဆုံးဖြတ်တတ်မှုကြောင့်ပဲ ဘာမဟုတ်တဲ့ အသေးအဖွဲ ကိစ္စလေးနဲ့တင် အဆုံးသတ် သွားရတာ နှမြောစရာရယ်ပါ။
ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားသွားတယ် ဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ်နဲ့ သံသယစိတ်က အစားထိုး ၀င်ရောက် လာတတ်တာ သဘာဝပါ။ ဒီသံသယစိတ်ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှု ကင်းသွားတာဟာ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက် အမျိုးမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်လာနိုင် စွမ်းပါတယ်။ ယုံကြည်မှုကိုသာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ အန္တရာယ် အသွယ်သွယ်ကနေ ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို ပြဿနာမျိုးစုံကိုလည်း တားဆီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ ဆက်ဆံနိုင်မှ သာလျှင် အောင်မြင်မှုနဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာ အဖြာဖြာကို ရရှိနိုင်မှာ ဧကန်မလွဲပါပဲ။
စိတ်နဲ့ကိုယ် ကပ်မနေပေမယ့် အများအမြင်မှာတော့ အောင်နိုင်သူအဖြစ် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားလိုစိတ်နဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဖျက်ဆီး ရိုက်ချိုးခဲ့သူများရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ကြီးမားတဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် တွေရှိမှာ အသေအချာပါပဲ။ တစ်ချို့ကျတော့ စိတ်ထင်တိုင်း ဇွတ်တရွတ် ဖန်းတီးယူတတ်တာကြောင့် ဘဝတက်လမ်း နှောင်းနှေးသွားရတတ် တာလည်း ရှိပါတယ်။ ဇွဲကြီးလွန်းပေမယ့် ထိုဇွဲကို စနစ်တကျ အသုံးမချတတ်တာကြောင့် ဆိုးကျိုးကိုသာ ရရှိတတ်ပြီး အောင်မြင်မှုနဲ့ အလှမ်းဝေးသွားတတ်ကြ ပါတယ်။
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာမှတော့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ဖို့၊ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ပြောဆို ဆက်ဆံတတ်ဖို့က အလွန်ပဲ အရေးကြီးလှပါတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူကို လူအများက ချစ်ခင် ယုံကြည် ကြသလို လောကကို အရွဲ့တိုက်ပြီး စိတ်ထင်ရာစိုင်း နေကြသူတွေကိုလည်း ဖွယ်ခွာ ရှောင်ရှားနေတတ် ကြပါတယ်။ လူ့အသိုင်း အဝိုင်းမှာ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေမို့ အကောင်းမြင် သဘောထားရှိသူ၊ အရာရာကို အဆိုးဘက်ကနေ ကြည့်မြင်တတ်သူ စသဖြင့် လူပေါင်းစုံနဲ့ ထိတွေ့ ပြောဆိုနေကြရပါတယ်။ ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသားနဲ့ တစ်ဖက်သားအပေါ် ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝထား ဆက်ဆံ တတ်သူတွေ အတွက်တော့ ကမ္ဘာလောကကြီးဟာ နေချင့်စဖွယ် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစဖွယ် အတိဖြစ်နေပါမယ်။ သူတစ်ပါးအပေါ် သံသယစိတ်နဲ့ မယုံမကြည် ဆက်ဆံတတ်မှုကနေ ရှောင်ဖယ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 5:07 PM
Labels: ဆုတောင်း, အတွေး
လူရယ်လို့ မွေးဖွားလာကတည်းက တစ်ယောက်ထဲ ရယ်ပါ။ လူ့လောကထဲ ရောက်လာတော့ တစ်ဦး တစ်ယောက်တည်း နေထိုင်လို့ မရတော့ပါဘူး။ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ ဆိုသလိုပါပဲ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် အမှီသဟဲပြု နေထိုင် လာခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု ဆိုတာ ဖြစ်တည်လာပါတယ်။ ဒီ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကနေ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး ရိုင်းပင်းကူညီမှုတွေ ရယူပြီး မိမိတို့ ဘဝအသီးသီးကို မြင့်မားအောင် ရပ်တည်ကြရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် ကျေးဇူးတရား ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျေးဇူး ဆိုတာကတော့ လူတိုင်းမှာ အပြန်အလှန် တင်ရှိနေကြတာပါ။ မိမိကသာ သူတစ်ပါးကို ကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှန်း၊ ကျေးဇူးပြန်ဆပ်ရကောင်းမှန်း မသိသည်သာ ရှိရပါမယ်။ ထမင်းတစ်လုပ် မဆိုထားပါနဲ့ ရေတစ်မှုတ် သောက်ရုံမျှဖြင့်လည်း သူသည် မိမိရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဖြစ်သွားတာကို သတိမူမိရင် မြင်တတ်မှာပါ။ လူတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကျေးဇူးဆိုတာ မြင်တတ်၊ သိတတ်ရင် ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက်မလဲနော်။ ကျေးဇူးသိတတ် သူဟာ မေတ္တာတရား ထားတတ်ကြသူများ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ ကျေးဇူကို မြင်တတ်ခြင်း အကြောင်းမှာ မိမိတွင် မေတ္တာဓာတ်ရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ တရားမှာ နာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျေးဇူး မတင်လျှင်နေပါ၊ ကျေးဇူးမကန်းပါနှင့် ဟု ပြောလေ့၊ ကြားရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကျေးဇူးမသိတတ်တာဟာ ကျေးဇူးကန်းတာ နဲ့ အတူတူ ပါပဲလေ။ ကျေးဇူးရှိမှ ကျေးဇွတ်ရ ဆိုသလိုမျိုးပေါ့။ ကျေးဇူးကန်းသူ တစ်ယောက် မဖြစ်အောင်တော့ မိမိတို့ စိတ်ထဲမှာ ကျေးဇူး တင်ထိုက်သူများကို အစဉ်အမြဲ ရိုသေလေးစား နေခြင်းက ကျေးဇူး သိတတ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတစ်ပါးရဲ့ ကျေးဇူးကို ပြစ်မှားခြင်းဟာ မိမိကိုလည်း အကျိုးယုတ်စေတဲ့ တန်ပြန်မှု ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် အပြန်အလှန်အားဖြင့် ကျေးဇူး သိတတ်ခြင်းဟာ ရှက်စရာ၊ ဂုဏ်ငယ်စရာ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျေးဇူးဟူသည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ လွတ်ကင်းနိုင်ခြင်း မရှိတာကို အစဉ်သတိရ အောက်မေ့ နေသင့်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းကို ပုလဲဧကရီ လို့တင်စားခေါ်ချင်ပါတယ်
ပုလဲဟာ ကျက်သရေရှိတယ်။ ပုလဲအရောင်ဟာ လူသားတွေရဲ့ နှလုံးသားကို ချမ်းမြေ့မှု အပေးနိုင်ဆုံး ဖြစ်တယ်
သူငယ်ချင်းကို မြင်ရရင် ရင်ကို အေးချမ်းပြီး ကျက်သရေရှိတဲ့ သူလေးတစ်ယောက်လိုပဲ မြင်မိတယ်
မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင် အဲဒီလိုဖြစ်အောင် စိတ်ထဲအမြဲ မွေးနေမိပါတယ်
သူငယ်ချင်းကကို ပုလဲဧကရီ လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်နိုင်အောင် ပုလဲဋီကာကို ပြောပြချင်ပါတယ်
ပုလဲဟာ တစ်ခြားကျောက်မျက်ရတနာတွေလို မဟုတ်ပါဘူး
လူတိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက် တင့်တယ်တယ်
ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး ပုလဲကို ၀တ်ဆင်ထားရင် အားလုံးဟာ တူညီတဲ့ ကျက်သရေကိုဆောင်တယ်
တန်ဖိုးအလိုက် ကြွားဖို့ ၀ါဖို့ ဂုဏ်ရှိဖို့ ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်ဖို့ အတွက်သာ အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပေမယ့်
တည်ကြည်ခြင်း ငြိမ်သက်ခြင်း မေတ္တာတရား သက်ဝင်ခြင်း စတဲ့
ကျက်သရေ အရိပ်အယောင်တွေနဲ့သာ နိမိတ်ဆောင်နေပါတယ် .. ..
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဣတ္ထိယတို့ အလှအပအတွက် ဖက်ရှင်အမျိုးမျိုး တီထွင်သုံးစွဲခဲ့ပြီး
ရေစီးကြောင်းတွေ တစ်ခေတ်ပြီးတစ်ခေတ် ပြောင်းခဲ့ပေမယ့် ပုလဲဝတ်ဆင်မှုကတော့
ခေတ်အဆက်ဆက် မပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး ရိုးသွားတယ်ရယ်လို့ မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာ သူငယ်ချင်း သိမှာပါ
အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပုလဲဟာ မိန်းမသားတို့ရဲ့နှလုံးသည်းပွတ်မှာ
မြတ်နိုးတွယ်တာ ခုံမင်စရာ ရတနာတစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ ထာဝရ ကိန်းအောင်းနေလို့ပါပဲ
ပုလဲကို ရတနာလောကရဲ့ ဘုရင်မ The Queen of Gems လို့ သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြတယ်
ပုလဲဟာ လှပရုံသာမက စန်းပွင့်တယ် နိမိတ်ကောင်းတယ် ဆိုပြီး နှစ်နှစ်ကာကာ ၀တ်ဆင်ခဲ့ကြတယ် .. ..
ပုလဲဟာ ရှေးအကျဆုံး ရတနာတစ်ပါးဖြစ်ပြီး
တစ်ခြား ကျောက်မျက်ရတနာတွေလို သွေးစရာလည်းမလို
အကွက်ဖော်စရာလည်းမလို အသင့်ဝတ်ဆင်နိုင်တာကြောင့် ကျောက်သွေးပညာ မပေါ်ခင်ကတည်းက ခေတ်စားခဲ့တယ်
ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ ဓမ္မကျမ်းစာမှာပဲ ကြည့်ကြည့်
ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ ရဟူဒီဓမ္မကျမ်းမှာပဲ ကြည့်ကြည့်
မူဆလင်တို့ရဲ့ ကုရ်အာန် ကျမ်းမှာပဲ ကြည့်ကြည့်
ပုလဲရတနာကို ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း အဖြစ် တင်စားဖော်ပြထားတာတွေ့ရမယ် .. ..
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ဘက်စုံ ထောင့်စုံကနေ အချက်အလက်ပေါင်းစုံနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်ကြသလို
ပုလဲတွေရဲ့ တန်ဖိုးကိုလည်း အချက်(၇)ချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်
ပထမအချက် အရောင် Colour ဖြစ်တယ် Body Colour နဲ့ ရောင်ပြေး Over Tone ကိုကြည့်ရတယ်
ဒုတိယအချက်က တောက်ပမှုစွမ်းအား Lustre
တတိယ ပုလဲရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ အပြစ်အနာအဆာ ကင်းစင်မှု
စတုတ္ထ ပုလဲရဲ့ သဏ္ဍာန် Shape
ပဉ္စမ အရွယ် Size
ဆဋ္ဌမ အချက်က ပုလဲရဲ့ သီကုံးပုံ Make
သတ္တမနောက်ဆုံးအချက်က ပုလဲရည် အထူအပါး Nacre Thickness တို့ပဲဖြစ်တယ် .. ..
အဖြူရောင်၊ နို့နှစ်ရောင်၊ ရွှေရောင်၊ နှင်းဆီရောင်၊ ပန်းရောင်၊ ခရမ်းဖျော့ရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ ကြေးဝါရောင် ရှိကြတယ်
အဖြူရောင်၊ နို့နှစ်ရောင်၊ နှင်းဆီရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အ၀ါရောင်၊ ငွေရောင်နဲ့ မီးခိုးရောင် တွေရှိတယ်
ပုလဲ အစစ်နဲ့ အတုကို လွယ်လွယ်ခွဲခြားတဲ့နည်းကို သူငယ်ချင်း မှတ်ထားပါဦး
ပုလဲသားကို လူရဲ့ ရှေ့သွားနဲ့ ပွတ်ကြည့်ရတယ်
ပုလဲအစစ်က သွားကို သဲနဲ့ရှသလို အာရုံမျိုး ခံစားရလိမ့်မယ်
ပုလဲအတုကတော့ သွားမှာ ဘာအာရုံမှမရဘဲ ချောနေပါမယ်
ပုလဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှောင်ရန် ဆောင်ရန်နဲ့ သတိထားရမှာတွေကတော့
ပုလဲကို အက်စစ်နဲ့ လုံးဝမထိမိပါစေနဲ့
အပြင်းစား အလှဆီ၊ အပြင်းစား ရေမွှေး၊ အပြင်းစား Hair Spray များနဲ့ ထိလို့မရဘူး
ပုလဲကို ၀တ်ဆင်ထားရင် ရေမွှေးဆွတ်ထာ သတိထားပေါ့နော်
ပုလဲကို မဝတ်ဆင်ဘဲ သိမ်းထားမည်ဆိုရင်တောင် (မာဆင့်များတဲ့)
ကျောက်မျက်ရတနာတွေနဲ့ ရောနှောသိမ်းဆည်းထားလို့ မရပါဘူး၊ ပုလဲကို ပွန်းပဲ့ ပျက်စီးစေတယ်
အကောင်းဆုံးကတော့ နူးညံ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ ကတ္တီပါဘူးများနဲ့သာ သိမ်းထားသင့်ပါတယ်
ကြိုးနဲ့သီသွယ်ထားတဲ့ ပုလဲလည်ဆွဲဆိုရင်လည်း ခြောက်လ တစ်ကြိမ်ကြိုးအသစ်လဲပေးရမယ် .. ..
ပုလဲကို ဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာလည်း ပုလဲဟာ ပေါ်လွင်ပြီးသားမို့
ဝတ်ဆင်သူတို့နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် စီစဉ်ရတာလည်း အဆင်ပြေလွန်းပါတယ်
မျက်နှာကျ ရှည်သွယ်တဲ့သူဆိုရင် လည်ပင်းအရင်းမှာကပ်ပြီး
ပုလဲလည်ဆွဲကို ဝတ်ဆင်မယ်ဆိုရင် ရှည်သွယ်တဲ့ မျက်နှာကို ပေါ်လွင်စေတယ်
ဝိုင်းတဲ့ မျက်နှာနဲ့ လေးထောင့်ပုံမျက်နှာပိုင်ရှင် ဣတ္ထိယတို့ အနေနဲ့
ရင်ညွန့်နဲ့ ရင်ညွန့်အောက်အထိရောက်တဲ့ ပုလဲထပ်ကုံးရှည်ကို ဝတ်ဆင်ပေးရမယ်
ဒါမှ ရှိပြီးသားအလှကို ပိုပေါ်လွင်စေပါတယ် .. ..
အဖြူရောင်ဟာ လူသားတွေကို ချမ်းမြေ့မှု အပေးနိုင်ဆုံးအရောင် ဖြစ်တယ်
အဖြူရောင်ရှိနေတဲ့ ပုလဲဟာလည်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ မင်္ဂလာသင်္ကေတ ပဲဖြစ်တယ်
လူ့ယဉ်ကျေးမှု ခေတ်ဦးကတည်းကနေ ကနေ့တိုင်
သန့်စင်ခြင်း စင်ကြယ်ခြင်း အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပုလဲဟာ
အပျိုစင် အပျိုမတို့ ဆင်မြန်းထားမယ်ဆိုရင်
ဒိုင်ယာနာနတ်သမီး ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းကို ခံရတယ်လို့ ယုံကြည်မိရင်း
မကြာမတင် ကျရောက်မယ့် သူငယ်ချင်းရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်
စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းနေတဲ့ တော်ဝင်အလှတစ်ပါး ပုလဲရတနာများနည်းတူ
သူငယ်ချင်းရဲ့ ဘဝလည်း အစွမ်းကုန် လှပ ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင် နိုင်ပါစေလို့ .. .. .. ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ် ။
(ပင်လောင်းမှာ ရှိနေစဉ်တုန်းက ရေးထားခဲ့တဲ့ စာလေးဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းစာအုပ်ကို code မဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ ပျက်ကွက်မှုအတွက် ဒီနေရာကနေ အနူးအညွှတ် တောင်းပန်ပါတယ်။ အားလုံးကို လေးစားလျက်ပါ။)
Labels: ဆုတောင်း, သူငယ်ချင်းအတွက်
ကိုယ့်မိသားစု အတွက်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူကိုဖြစ်စေ၊ ခင်မင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ဖြစ်စေ မထင်မှတ်တဲ့ လိုအပ်တာ လေးတွေကို အကောင်းဆုံး ဖြည့်ဆည်း ပေးတာက သိပ်ကို ရိုးစင်းတဲ့အကူအညီ တစ်ခုပဲလို့ နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ နေ့တိုင်း ကျွန်တော် ရွေးချယ်ပြီး ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မသိအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သေးသေးဖွဲဖွဲ့ အမှတ်တမဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် လေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို အားပေးထောက်ခံ ပေးတာမျိုး၊ အချိန်နဲ့ အင်အား ပေးဝေပြီး နားထောင်ပေးခဲ့တာမျိုး တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျိုးမပါပါဘဲ လုံးဝ အတ္တမဆန်တဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ကတော့ ကြိုးစားနေဆဲပါ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ ကျွန်တော့်ဘဝနဲ့ တခြားသူတွေ အတွက် လုပ်ဆောင်ချက် တွေတစ်သားတည်း တစ်ထပ်တည်း ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပေမယ့် ကြိုးပမ်းအားထုတ် ခဲ့မှုအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိတဲ့အလျှောက် ကျွန်တော်ရဲ့ ဘဝနေနည်းအပေါ် ကျွန်တော် အားရ ကျေနပ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုရိုးစကားတစ်ခုကို သာဓက ပြချင်ပါတယ်။ " ပေးဆပ်ခြင်းက သူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုလာဘ် " ဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ စာတွေအပေါ် စာဖတ်သူတွေက အသိအမှတ်ပြု ဖတ်ပေးတာကို ပြန်ပြီး ရရှိပါတယ်။ ကိုယ်ပေးလိုက်တာနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးအစား ညီညီ ကိုယ်ပြန်ရတာပါ။ မေတ္တာပေးရင် မေတ္တာပြန်ရသလို စေတနာဟာလည်း တုံ့ပြန် စေတနာ ပြန်လာတတ် ပါတယ်။ ။ တစ်စုံတစ်ယောက် အတွက် ကောင်းတာလေး ကူညီပေးပေမယ့် တစ်ခြားသူတွေကရော ငါ့အတွက် ဘာလို့ပြန်မလုပ်ပေးတာလဲ ရယ်လို့ တွေးမိတာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ သူတစ်ပါး အတွက် စေတနာနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကူညီပေးခြင်းတွေဟာ ဘဝတစ်ခုလုံး လုပ်ဆောင်နေရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆထားပါတယ်။ ဒါက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ်မှာ ထားရမယ့် ကျွန်တော့် သဘေားထား အမြင်လေးပါ။
လူငယ်တို့သဘာဝ နှစ်ပတ်လည်လို့ ကိုယ့်မွေးနေ့ ရောက်လေတိုင်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူး ကြတာ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မွေးနေ့မှာ ကိုယ့်မိသားစု စုံစုံလင်လင်နဲ့ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေး ချက်စားကြမယ်။ စားနေကျ ထမင်းတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ရှမ်းပြည်မှာဆို ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ချက်စားမယ်။ ရှမ်းမုန့်တီ(ခေါက်ဆေန့်) ချက်စားမယ်။ ရှမ်းထမင်းချဉ် နယ်စားမယ်၊ ရှမ်းဟင်းထုတ် လုပ်စားမယ် တစ်ခုခုပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် ခင်မင်တဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အပေါင်း အသင်းတွေကို အိမ်ခေါ်ပြီး ပါတီပွဲလေး လုပ်မယ်။ (မွေးနေ့လက်ဆောင် ကိုချစ်တတ်လို့ လုပ်တာပါ။) နာမည်ကြီးတဲ့ အကျော်အမော် တွေကျတော့ နိုင်ငံသိ မွေးနေ့ပွဲကို ချိမ့်ချိမ့်သဲ ကျင်းပတာတော့ ရှိပါတယ်။ အဆိုတော်တွေ ကျတော့လည်း သီချင်းခွေ တစ်ခွေ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ချပ်တွဲ အခွေ ထုတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် အဆိုတော်တွေ ဖိတ်ပြီး စတိတ်ရှိုး ကြတာလည်း ခဏခဏ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မွေးနေ့ရှင်အတွက် ဆုတောင်းပေးရတာလည်း ပျော်စရာ တစ်မျိုးပါ။ ကျန်းမာပါစေ၊ တိုးတက်ပါစေ ကအစ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင် ချစ်သူ ခင်သူတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး စခန်းသွားနိုင်အောင် အထိ ဆုတောင်း ပေးကြပါတယ်။ ဒါက လူငယ်တို့ သဘာဝပါ။
တစ်ချို့ကျပြန်တော့ မွေးနေ့တစ်ခါ ရောက်လေတိုင်း အသက်တစ်နှစ် ကြီးသွားလို့ ငါအိုပြီ ဆိုပြီး သောက ရောက်နေကြတဲ့ သူတွေ၊ စိတ်ပူပန်နေကြတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပြန်ပါတယ်။ ကိုယ့် အသက်ကြီးသွားတာကို ယူကြုံးမရ ဖြစ်နေကြတဲ့ သူတွေပါ။ အမှန်တော့ အသက်ကြီးလာတာဟာ စိတ်ဓာတ်ကျစရာ၊ ပူပင်သောက ရောက်စရာ ဖြစ်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ လွဲမှားတဲ့ အယူတွေ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင် အသက်ကြီး လာရင် အဘက်ဘက်က ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန် လာတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အသက်ရ လာတော့ ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာလာမယ်၊ ပိုပြီး ထက်မြက်လာမယ်၊ ပိုပြီးအတွေ့အကြုံတွေ ရင့်သန်လာမယ်၊ ပိုပြီး သန်စွမ်းလာမယ်၊ ပိုပြီး ထက်မြက် ချက်ချာလာမယ်လို့ မျှော်လင့်စရာတွေ ထားပြီး ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့တာလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ဘဝမှာပိုပြီး ပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မယ် (Dr. Peter Ubel. M.D.)
အသက်(၇၀) အရွယ်တွေက အသက်(၃၀) အရွယ်တွေထက် ပိုပြီး ကျေနပ် ပျော်ရွှင် ရောင့်ရဲကြပါတယ်။ သူတို့ကို ဘယ်အရာကမှ ပျော်ရွှင်စေသလဲ ဆိုတာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ အချိန်ရသွားကြပြီး ကောင်းစွာ သဘောပေါက် သွားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့ရဲ့ သဘောထား အမြင်တွေက တိုးတက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနက် အိပ်ရာက နိုးရင် ဘယ်အရာကို ပြုလုပ်ချင်တဲ့ အတွက် နိုးသလဲလို့ တွေးကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ လုပ်ချင်တာကို ပိုပြီး လုပ်မိအောင် ကြိးစားပါ။ ဒါဟာ အသက် (၃၆)နှစ်ဖြစ်စေ၊ အသက် (၉၆)နှစ် ဖြစ်ပါစေ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ခြင်းရဲ့ သော့ချက်ပါပဲ။
မိမိကိုယ်ကို ပြတ်သားစွာ ဖော်ထုတ်ပြသပါ (Dr. Pierce J. Howard Ph.D.)
အသက်ကြီးသူတွေရဲ့ ဦးနှောက်ကို Scan လုပ်ကြည့်တဲ့ အခါ ဦးနှောက်နှစ်ခြမ်းရဲ့ ဆက်သွယ်မှုကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဘက်က တွေးခေါ် စဉ်းစားဥာဏ်အပိုင်း၊ ညာဘက်က ခံစားမှုအပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာလေ ပိုပြီး အားကောင်းလာလေ ပါပဲ။ ဆိုလိုတာက ဆက်သွယ်ရေးကို ပိုပြီး ထိရောက်စွာ ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း ရှိလာပြီး လိုချင်တဲ့ အဆင့်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ရရှိ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မဂ္ဂဇင်းတွေရဲ့ နောက်ကျောမှာ ပါတဲ့ ပဟေဠိတွေ၊ ဥာဏ်စမ်းတွေကို ဖြေကြည့်ပါ။ ဥာဏ်ကို အသုံးပြု ရတဲ့ ကစားနည်းတွေကို ကစားကြည့်ပါ။ ဦးနှောက်ကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်းက ဆက်သွယ်မှုတွေကို ပိုပြီး အားကောင်းလာအောင် အကူအညီပေးပါတယ်။
ပိုပြီးတော့တောင် မြန်မြန်စဉ်းစား လာနိုင်သေးတယ် (Dr. George Martzokis. M.D.)
ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို သွယ်တန်း ဆက်သွယ်ထားတာတွေက အသက်ကြီးလာလေ ပိုပို ကြီးထွားလာပြီး ထူထဲ လာပါတယ်။ အသက် (၆၀)ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ဦးနှောက် အချက်အလက်တွေကို အဆ တစ်ရာ ပိုပြီး စုဆောင်းရရှိ နိုင်ပြီး ဆယ်ဆ ပိုပြီး မြန်ဆန်လာပါတယ်။ အရွယ်ရလာရင် ငါးကြီးဆီကိုစားပါ၊ ဦးနှောက်ကို အမြဲထက်မြက် သွက်လက် နေစေဖို့ Fatty acids တွေ ရရှိနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့ကို 3000 mg စားသုံးပါ။
စူးရှထက်မြက်တဲ့ အာရုံကို သိစိတ်ရရှိ ပါလိမ့်မယ် (Dr. Elkhonon Goldberg. Ph.D.)
အလိုလို သိမြင်နေတဲ့ စိတ်တွေက အချိန်အခါ အလိုက် တိုးတက်လာတယ်လို့ ထင်မိရင် အဲဒါ မှန်ကန်ပါတယ်။ စိတ် သမာဓိအားက ငြိမ်သက် တည်ကြည်လာလေ ခန့်မှန်းချက်တွေ မှန်ကန်လေပါပဲ။ ထိုးထွင်း သိမြင်စိတ်နဲ့ ပြဿနာရဲ့ အဖြေက ဘယ်ကမှန်းမသိဘဲ ပေါ်ထွက်လာရင် စာဖတ်သူရဲ့ ဦးနှောက်က ဒီလို အလားတူ အဖြစ်မျိုး ကျန်ခဲ့တဲ့ အချိန်က ဖြစ်ခဲ့တာကို မှတ်မိသွားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအသိကို အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အပေါ်မှာ အသုံးချလို့ ရသွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သံသယဖြစ်နေရင် ဘယ်ဟာက မှန်မယ်ထင်သလဲ လို့ မေးကြည့်ပါ။ အတွင်းကအသံကို ပိုပြီး တိုင်ပင်ကြည့်လေ၊ ပိုပြီး ကြည်ကြည်လင်လင် ကြားရလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသက်ကြီးလာရင်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ယောဆရာတော် ဘုရားကြီးက အသက်ကြီးလာတဲ့ သူတွေ အိုပယ် မဖြစ်ကြစေနဲ့၊ အိုကြွယ် တွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ တရားသဘောနဲ့ ဆုံးမ ထားတာကို အမှတ်ရမိမှာပါ။ အိုမင်းမစွမ်းလို့ ဆိုကြပေမယ့် ရုပ်က နာပေမယ့် စိတ်ကမနာဘဲ အိုပေမယ့် စွမ်းအောင် စွမ်းဆောင် ကြိုးစားကြပါလို့ တိုက်တွန်း ချင်ပါတယ်။အားလုံးကို လေးစားလျက်ပါ။
Labels: ဆုတောင်း, မျှဝေခြင်း